b-777-200 အကူအညီ3လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1736
ကိုယ့် auto pilot ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကိုနှိပ်ပါသောအခါ, enable ပါဘူး အကြံပေးချင်လား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
b-777-200 အကူအညီ3လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1737
ငါဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြန် install လုပ်ပါ။ အခုတော့ autopilot အလုပ်လုပ်တယ်, ဒါပေမယ့်လေယာဉ်သုတ်ဆေးကိုပြသထားဘူး။ အဖြူရောင်သတ္တုများသာရှိသည်။ အကြံဥာဏ်တွေရှိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
b-777-200 အကူအညီ3လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1738
DirectX 10 preview mode ကိုပိတ်ထားပါ FSX ဂရပ်ဖစ် settings ကို။
b-777-200 အကူအညီ3လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1739
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုပြု၏။ ပြန်လည်စတင်ရန်လိုသည် fsx ကြည့်ရန်။ သင်တန်း၏ aal ကို virtual အပေါ်ယခုလက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်ပျံသန်း
b-777-200 အကူအညီ3လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1746
erik ။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်လေယာဉ်အခုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
b-777-200 အကူအညီ2လအတွင်း2weeks ago #1775
ဟေ့ဒီမှာ။ ငါ 777 နဲ့ပြaနာရှိနေတယ်။ ငါနဲ့အတူငါပေါက်ကွဲတော့အင်ဂျင်စက်တွေတောင်မှတူရိယာတစ်ခုမှမအလုပ်လုပ်ဘူး။ ခလုတ်များနှင့် autopilot ရှိအက္ခရာများသည်မတည်ရှိပါ။ အနိုင်နိုင်ဘာမှထိမိသည်။ ငါပါမယ် FSX Deluxe Edition ကို SP1 ။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
b-777-200 အကူအညီ2လအတွင်း2weeks ago #1776
ငါ Rikoooo ကနေဘိုးအင်း 777-200ER တပ်ဆင်နိုင်ဘူး